ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ပြန်ဖို့ပါပဲလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ စီဘယ်လော့ – MyMedia Myanmar
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ပြန်ဖို့ပါပဲလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ စီဘယ်လော့
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကစားသမားဖြစ်သူ ဒန်နီ စီဘယ်လော့ က သူ့အနေနဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ တတိယ အငှားရာသီ အတွက် စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကို ပြန်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူဖို့ကသာ သူ့ရဲ့ ဦးစားပေးအရာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ စီဘယ်လော့နဲ့ အာဆင်နယ် အကြား ဒုတိယ အငှားရာသီ စာချုပ်ဟာ မကြာခင်မှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် စီဘယ်လော့က သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းမှာ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်ရ ကစားသမား ဖြစ်လာဖို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်နီ စီဘယ်လော့ဟာ ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာသီမှာ အာဆင်နယ် အသင်းအတွက် အထင်ကြီးလောက်စရာ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အာဆင်နယ် အသင်းဟာ သူ့ရဲ့ အငှားစာချုပ် သက်တမ်းကို နောက်တစ်နှစ် ထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။
စီဘယ်လော့ဟာ ဒီရာသီမှာတော့ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် မရရှိပဲ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းကလည်း သူ့ကို ပြန်ခေါ်ယူပြီး အခြားအသင်း တစ်သင်းမှာ ပြန်လည် အငှားချမယ် ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။ စီဘယ်လော့ဟာ သူ့အနေနဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာ ရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ အနာဂါတ်ကိုတော့ လန်ဒန်မှာထက် မက်ဒရစ်မှာသာ ပိုမြင်ချင်မိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်တော် မက်ဒရစ် နဲ့ စာချုပ် အရှည်ကြီး ချုပ်ဆိုထားတာပါ။ တတိယအငှားရာသီလား ? မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ပြန်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်းမှာ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ချင်တာပါ။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်ပြန်လာပြီး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကို ပြန်လည် ရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မက်ဒရစ် နဲ့ စာချုပ် အရှည်ကြီး ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ၂ နှစ်ခွဲ ကျန်ပါသေးတယ် ”
“ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော် အာဆင်နယ် အသင်းကို အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ ထားခဲ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အာဆင်နယ်မှာ အောင်မြင်ဖို့ပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန္ဒကတော့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်ဖို့ပါပဲ။ မက်ဒရစ်မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖို့တော့ နည်းပြ ဇီဒန်း ရောက်လာတာက အားလုံးအတွက် ကောင်းတဲ့ အရာပါ။ နည်းပြ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းက သူတို့အကြိုက်ကစားသမား ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ သူက ကစားဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ကို လိုအပ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ နဲ့ ကျွန်တော့်အကြားမှာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ မိုက်ကယ် အာတီတာ က ကျွန်တော့်ကို အသင်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ နည်းပြ တစ်ဦးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သူက ကျွန်တော့်ကို တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ကစားခိုင်းလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးရပြီဆိုတာနဲ့ သူက ကျွန်တော်တို့ကို တိုက်စစ်ဆင်ကစားစေတယ်။ နည်းစနစ်ပိုင်းအရဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်က လာလီဂါထက် အနည်းငယ် အဆင့်နိမ့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကတော့ ပိုသာပါတယ်။ နံပါတ်၈ နေရာက ကျွန်တော့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုးဝါးတဲ့ ပုံစံနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အသင်းတစ်သင်း အနေနဲ့ ဥရောပတစ်နေရာ အတွက် ဦးစားပေး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အခါမှာ ရုန်းထွက်ဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတူတကွ နိုင်ပွဲသုံးပွဲရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဇယားရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကို တက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
The post ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ပြန်ဖို့ပါပဲလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ စီဘယ်လော့ appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-06T19:33:10+06:30January 6th, 2021|MYSPORT MYANMAR|